Daawo: Obama oo Qoob ka ciyaar la yaab leh soo bandhigey, intii uu ku guda jire… | shumis.net
Home » Layaab » Daawo: Obama oo Qoob ka ciyaar la yaab leh soo bandhigey, intii uu ku guda jire…
Daawo: Obama oo Qoob ka ciyaar la yaab leh soo bandhigey, intii uu ku guda jire…
Xaflada cashada waxaa u sameeyay madaxweyne Obama iyo xaaskiisa, madaxweynaha dalka Argentine Mauricio Macri. Inta aanay xaaladan ku dhicin Madaxweyne Obama, waxay Obama iyo xaskiisa daawadeen lamaanayaal ciyaartan si heer sare ah ugu soo bandhigay marti sharafta horteeda, kadibna mid kamida haweeneyda ciyaartaasi ayaa u tagtay madaxweyne Obama oo fadhigiisa uga codsatay inuu la ciyaaro iyadoo gacanta u taageysa.
Inta ciyaarta madaxweyne Obama iyo haweeneydaasi dhex martay oo indhaha caalamka soo jiidatay waxaa barbar socday ciyaar kale oo Michele Obama iyo nin ka mida kuwa ciyaartan yaqaana ka dhex socotay, laakiin indhaha oo dhan waxay ku sii jeedeen Obama, dhaqdhaqaaq iyo isla jimcsi socday muddo kooban kadib waxaa la joojiyay miyuusikii waxaana dhammaatay ciyaartii iyadoo sacab badan u dhacay madaxweyne Obama.
Saxaafadda caalamka ayaa si weyn u hadal heysay qisada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ku qabsatay guriga Madaxtooyad ee magaalada Buones Aires, waxayna intooda badan ku sheegeen madaxweynaha inuu ka baxsaday xaaladaas adag oo soo wajahday.
Title: Daawo: Obama oo Qoob ka ciyaar la yaab leh soo bandhigey, intii uu ku guda jire…